NextMapping | Quiz amin'ny Internet
Ny ho avin'ny asa fanadinana
Ny ho avin'ny asa izao ary vonona ianao ankehitriny? Izahay ato amin'ny NextMapping ™ dia mifantoka amin'ny zavatra rehetra ho avy sy hanampy anao ho tonga any.
Ny fankanesana any aoriana dia midika fisainana miverimberina amin'ny zotra mankany amin'ny fomba fijery marobe.
Fotoana famerenana indray ny ho avy sy hamorona ireo rafitra ho tonga ao. Raiso ity quiz haingana ity hahitanao izay misy anao amin'ny tondrozotra mankany amin'ny ho avy. Satria ny fomba tsara indrindra hifaninanana amin'ny ho avy dia ny famoronana azy!
Moa ve ny orinasanao amin'ny fivoaran'ny teknolojia anisan'izany ny fifindran'ny rahona avy amin'ny rafitry ny lova na ny optimization rahona hampiakarana ny fahalalahan'ny asa?
Fanamarihana: Ny fifantohana amin'ny ho avy dia ny optimization rahona ao anatin'izany ny fanatsarana ny filaminana, ny vahaolana be dia be, ny fanararaotan'ny mpampiasa ny mpanjifa ary ny fahafahan'ny mpiasa hampiasa rahona (loharano: enterprisersproject)
Moa ve ianao manana eritreritra, rafitra sy fomba fiasa ao amin'ny ho toeran'ny ho avin'ny asa?
Fanamarihana: Mba hamoronana hoavy betsaka dia mila ivondronan'ireo olona mifantoka amin'ny fisainana toy futuriste, humanists, technologie ary innovators (loharano: SingularityU)
Moa ve ianao mametaka ny fisainana vaovao, loharano ary fanohanana ilaina hitadiavanao hiaina amin'ny ho avy?
Fanamarihana: Ny zavatra azonay teto dia tsy ho tonga any aminay (Marshall Goldsmith)
Manova ny fomba ieritreretan'ny mpitondra ny ho avin'ny raharaham-barotra manomboka any ambony ka hatrany ambany ianao?
Fanamarihana: Ny fanavaozana manelingelina dia mety handratra raha tsy ianao ilay manao fanelingelenana (Clay Christensen)
Manana drafitra stratejika ho an'ny inona ho anao sy ny orinasanao ve ianao?
Fanamarihana: Ny dingana voalohany dia ny hanorina fa misy ny mety hiseho raha toa ka hisy ny mety hiseho (Elon Musk)
Raha toa ka mamaly TSIA amin'ireo fanontaniana ireo ny fahafahana hanana fifanakalozan-dresaka aminay momba ny NextMapping ny ho avinao.
Azafady mba mifandraisa aminay hametraka antso mifameno hiresaka momba anao sy ny ho avinao michelle@nextmapping.com.